ललितपुरको खोकनामा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच डरलाग्दो झडप !! (भिडियो सहित्) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/ललितपुरको खोकनामा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच डरलाग्दो झडप !! (भिडियो सहित्)
ललितपुरको खोकनामा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच डरलाग्दो झडप !! (भिडियो सहित्)
काठमाडौं । ललितपुर एकाएक रणभुमि बनेको छ । ललितपुरको खोकनावासी र प्रहरीबीच शनिबार दिउँसो तनाव भएको छ । खुडोल फाँटमा रोपाइँ गर्न गएका स्थानीयलाई प्रहरीले अवरोध गर्न खोजेपछि विवाद भएको हो । यस घटनामा परी ४ जना प्रहरी घाइते भएका छन् । प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि ७ रा–उ–न्ड अ–श्रु ग्यास समेत प्र–हा–र गरेको छ ।
तनावपछि अहिले खुडोल फाँटमा स्थानीयले पुनः धान रोपेका छन् भने त्यस क्षेत्रमा प्रहरीको बाक्‍लो उपस्थिति छ । यो फाँट काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को ‘जिरो किलोमिटर’हो । सो क्षेत्रको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ । तर, स्थानीयले भने मुआब्जा लिइसकेका छैनन् ।